CONCENTRATE BEDING ACIDIC REDKEN
Ry mpanjifa hajaina, mampahafantatra anareo izahay fa mandalo fanavaozana izahay mba hiantohanay ny marika tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra. Noho izany antony izany dia azo inoana fa maro amin'ireo vokatra ankafizina no lany. Hamerina ny entana izahay haingana araka izay azo atao. Misaotra anao nahatakatra!
Acidic Bonding Concentrate no vahaolana avo indrindra ahazoana tombony Redken ho an'ny volo voahodina, mifototra amin'ny fitoviana volo salama an'i REDKEN: fanamboarana (fatorana) + hydration (fifantohana avo lenta amin'ny agents condisioner) + asidra pH (volo salama misy pH eo anelanelan'ny 4.5 sy 5.5).
Filter by rehetra Mahitsy ny volo Ny volo miloko Ny volo miaraka amin'ny Hevitra Misongadina Mamontsina volo Volo simba Miala ao Blondes Brunettes Repair Texturizers Ny karazana volo rehetra
Vidiny ara-dalàna € 18.93